वित्तीय समय: TSMC अर्धडी उद्योग उद्योग को मूल बन्छ? - YIC International International Co |तपाईंको इन्टरजेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स घटक आपूर्तिकर्ता |www।YIC-Electronics.com
घर > समाचार > वित्तीय समय: TSMC अर्धडी उद्योग उद्योग को मूल बन्छ?
वित्तीय समय: TSMC अर्धडी उद्योग उद्योग को मूल बन्छ?
नयाँ प्रविधिका लागि चिप अभावको अवधिमा, TSMC सधैं चिप उत्पादनमा सँधै प्रमुख स्थिति कब्जा गरिन्छ। वित्तीय समयले भर्खर हालसालै विश्वव्यापी अर्धवान्डुनिक उद्योगको मूल हुनुको कारणको विश्लेषण गर्दछ।
ताइवानको दक्षिणी भाग, चीन एक पटक एक दशमलदको ग्रामीण शहरमा थियो। विश्वको सबैभन्दा उन्नत चिल्लो कारखाना-TSMC को आगमन संग, एक निर्माण फ्रिज सेट गरिएको छ।
यो रिपोर्ट गरिएको छ कि TSMC ले टोननमा एक 3NM चिप कारखाना निर्माण गर्दैछ। ली टा-सेन, जसले स्थानीय स्वासेटको ब्रशर कम्पनीलाई चलाउँदछ, उनले भने: "गत वर्षको कारखानाको लागि छेउछाउको छेउछाउको, र हाम्रो कारोबार लगभग 10 बर्षमा पुगेको छ।" उनले TSMC का ईन्जिनियरहरूलाई नयाँ अपार्टमेन्टहरू र आवास परिस्थितिलाई काँप्ने देख्दछन्।
यद्यपि TSMC को नयाँ बोटको प्रभाव तोपनाभन्दा धेरै टाढा छ, र यसले सम्पूर्ण अर्धवांडरक बजार बजारमा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। कारखानाले 1 1600,000 वर्ग मिटरको क्षेत्र समेट्छ, 22 फुटबल मैदानहरूको आकार बराबर हुन्छ, र अर्को वर्ष knn मिटर चिप्सको मास उत्पादन सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि TSMC कम कुञ्जी कम्पनी हो, तर कटौती टेक्नोलोजी र बढ्दो प्रभावमा यसको ठूलो लगानी चुपचाप मानिसहरुको ध्यान आकर्षित गर्दैछ।
ग्लोबल चिप, युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाले अटोमोबाइल उत्पादनलाई सुस्त बनाउन वा निलम्बन गर्न बाध्य पार्छ, र स्थानीय क्षेत्रको सरुवा गर्ने थप देशहरूले ग्लाइमेन्टको प्रभावशाली स्थानमा आकाकाएका छन्। व्यापक ध्यान आकर्षित गर्दै। ।
वित्तीय समयले यो औंल्याए कि अमेरिका TSMC भन्दा चिप उत्पादन गर्न धेरै कम सक्षम छ, र इंटेलले प्रोसेसरको उत्पादनको हिस्साको भागलाई TSMC लाई उत्पादनको हिस्साको तयारी गरिरहेको छ। थप रूपमा, यूएस. प्रतिबिम्ब विभागले उन्नत चिप निर्माणमा लगानी बढाउन पनि दबाब दिएको छ ताकि यसको हतियार उत्पादन विदेशी उत्पादनमा निर्भर हुँदैन।
धेरै सरकारहरूले त्मीसीको सफलताको अनुकरण गर्ने आशा गरे पनि TSMC मिलाउन कोशिस गर्दै गरेको लागत अझै पाउन सकिन्छ। TSMC का ग्राहकहरूले पनि महसुस गर्न थाले कि उनीहरूले परम्परागत आपूर्तिकर्ताहरूसँग व्यवहार गरिरहेका छैनन्।
एम्ब्रालाई, संस्थापक र सीईओ सेरको परामर्श कम्पनीले भने: "ती विश्वका राक्षसहरू हुन् र कार खरीद टोली 'कमिलाहरू' हुन्। "
TSMC को सफलता
TSMC लामो समयदेखि "पर्दाको पछाडि" भएको छ किनकि सेमीन्डुन्डरकक्टर उत्पादनहरू उत्पादनहरू उत्पादनहरू एप्पल, एएडी वा क्रोकेट जस्ता ब्रान्डहरू द्वारा बेचिन्छ। यद्यपि TSMC ले विश्वको आधा भागको आधा भन्दा बढी नियन्त्रण गर्दछ।
यो उल्लेख गर्न लायक छ कि प्रत्येक नयाँ प्रक्रिया नोडमा, TSMC अधिक र अधिक प्रभावकारी भइरहेको छ: यद्यपि यसले228-6565ne को राजस्व (65 65% लाई धेरै स्वयं उत्पादन गर्न प्रयोग गर्थे)। उन्नत नोडहरू हाल उत्पादन गरिएको, यसले बजारको लगभग% 0% ओगटेको छ।
सान फ्रान्सिस्कोका बाचना र कम्पनीको एक साथीले माथिको बयान पाएको बयान पाएका साथी हनबरीले भने: "अर्धन्डोक्टर उद्योग TSMC उद्योगको निर्भरता अविश्वसनीय छ। बीस बर्ष अघि 20 संस्थाहरू थिए, र अब सबैभन्दा काट्ने धार प्रविधि ताइवानमा अवस्थित छन्। पार्कमा। "
किनभने प्रत्येक नयाँ प्रक्रियामा शदार्ड नयाँ क्षमतामा बढी चुनौतीपूर्ण विकासको लागि आवश्यक पर्दछ, अन्य चिप उत्पादकहरूले वर्षहरूमा डिजाइनमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन्, र खारेज भएका संस्थाहरूलाई विशेष संस्थाहरूमा उत्पादन गरिएको छ। नयाँ उत्पादित एकाईको लागत अधिक, अन्य अन्य चिप उत्पादकहरूले आउटसोर्स गर्न थाल्छन्, र कम प्रतिस्पर्धी TSMC शुद्ध रेफरी बजारमा हुन्छ।
यस वर्ष TSMC ले आफ्नो पूंजी लगानीलाई पूर्वानुमानमा225 billion अर्ब रुपैयाँ पूर्वानुमानको लागि225 अर्ब डलरमा अमेरिकी डलर अमेरिकी डलर अमेरिकी डलर अमेरिकी डलर अमेरिकी डलर अमेरिकी डलर अमेरिकी डलर अमेरिकी डलर र इंटूस र सामसुको भन्दा बढी हुन सक्छ। विश्लेषकहरू विश्वास गर्छन् कि यसमा यसले आम्दानीको आवश्यक उत्पादन क्षमताको टीएमसीको आपूर्तिमा लगानीको कम्तिमा कम्तिमा कम्तिमा पनि समावेश गर्दछ। इंटेल प्रोसेसर उत्पादको बहिष्कार गर्न बाध्य पारिएको थियो किनकि यसको आफ्नै kypm र 7nm को दुई लगातार प्रक्रिया टेक्नोलोजी नोडहरू समात्न गाह्रो भएको छ।
दोस्रो पुस्ता उत्पादनको निरन्तर गल्तीहरू दोस्रो-पुस्तिका टेक्नोलोजीहरूले लगानीकर्तालाई कम्पनीलाई चिप उत्पादनलाई चिच उत्पादन गर्न लगाउँछन् र "फ्लेन्स" व्यवसाय मोडेलमा स्विच गर्न आग्रह गर्दछ।
यद्यपि इंटेलको नयाँ सीईएओ प्याट ग्यालेन्जरले यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्यो र मंगलबार एक भिडियो सम्मेलनमा भनिएको: "7m मा 7m मा जनसंख्या बढ्दो छ। इंटेलले TSMC र अन्य संस्थाहरूको साथ सहयोग सुदृढ पार्दैछ, र TSMC मा केहि प्रोसेसर आउटसोर्स। "
यद्यपि प्याज ग्यालिंगर इंटेलको उत्पादन क्षमताहरूलाई पुनर्जीवित पार्ने आश्वासन दिइएको छ, कम्पनीलाई अझै पनि समय अवधिको लागि TSMC आवश्यक छ केन्द्रीय प्रोसेसर बजारमा प्रतिस्पर्धा बजारमा हल गर्ने समय अवधि।
कसरी हावी गर्न?
TSMC चिप निर्माणको क्षेत्रमा बढ्दो वृद्धि भएको छ र राजनैतिक ध्यानमा आकर्षित गर्न सुरु भएको छ। स्वचालित चिप्सको अभावको प्रभावले महामारीवादी, र त्यो आपूर्ति श्रृंखला अन्तर्गत हल गर्ने जोखिम कम गर्नको लागि महत्वपूर्ण आपूर्तिको सरकारहरूको दबाबको आवश्यकता पर्दछ। गेपिटल कारकहरू द्वारा प्रभावित छैन।
अमेरिकाका सभासद्हरूले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई चिप शुभागको आधारमा अर्धविकाले निर्माण उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न भने। गत वर्ष, ट्रम्प प्रशासन को राजनीतिक दबाव अन्तर्गत टीसीएमसीले एरिजोनामा अमेरिकी डलर वेफर निर्माण प्लान्ट निर्माण गर्ने प्रतिज्ञा गर्यो।
संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र युरोपियन युनियनले पनि फरक पार्नको लागि शुरू गरेका छन्। TSMC गएको महिना घोषणा गर्यो कि यसले जापानमा एक सहायक स्थापित गर्नेछ कि जापानले नयाँ अर्धवेन्द्रन्डरकन सामग्रीमा अनुसन्धान गर्ने सहायक हुन। जापानी अधिकारीले चेतावनी दिए: "TSMC ताइवान, चीनमा मात्र सुरक्षित छैन र तितरबितर हुनु आवश्यक छ।"
EU ले 2NM चिप कारखानाको निर्माणमा लगानी गर्ने योजना मार्फत लगानी गर्ने योजनाको रूपमा कटरिंग-एज अफ युरोपमा फिर्ता ल्याउने आशाको रूपमा। यो कला र प्रविधि नोड हो।
केहि डाटाबाट, TSMC को बल हेर्न यो पर्याप्त छ। TSMC यस मूल्यमा2billion अर्ब डलरदेखि225 अर्ब डलरदेखि2billion अर्ब अमेरिकी डलरलाई बढाउनेछ जुन 2020 को तुलनामा% 63% ले वृद्धि हुनेछ; Snnm, ट्रान्जिस्टोर आकार मानव कपाल को 1/20000 हो, र हाल उत्पादन गरिएको सबैभन्दा उन्नत चिप हो; % 0%, TSMC को बजारको बजारमा हाल उत्पादन गरिएको नोडहरूको मार्केट सेयर।
विश्लेषकहरूले औंल्याए कि TSMC यति कुशल र लाभदायक छ भनेर औंल्याए कि यसको निर्माण उद्योग ताइवानमा केन्द्रित छ। एक त्सुएमसी प्रवक्ताले एक पटक सार्वजनिक रूपमा भने: "ताइवानका tmc को कारखानाहरू धेरै नजिक छन्। TSMC लचिलो ईन्जिनियरहरूलाई परिचालन गर्न र आवश्यक छ।"
संयुक्त राज्य अमेरिकामा उत्पादन लागतहरू भन्ने कम्पनीले अनुमान गरेको छ कि ताइवानका ती भन्दा %% देखि 10% छ। तसर्थ, विश्वभरि आफ्नो उत्पादन परिचालन फैलाउन TSMC तयार छैन। एक त्सुएमसी कार्यकारीले भने: "अमेरिकी अधिकारीहरूले यो स्पष्ट पारे कि कम्पनीको भविष्यको लागि महत्वपूर्ण छ। जे होस्, यो मामला मा छैन युरोप गम्भीर। यूरोपीय अधिकारीहरूले आफूले चाहेको कुरा पत्ता लगाउनुपर्दछ र आफ्नै स्टाप निर्माणकर्ताहरूसँग यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछन्। "
संस्थावर्ध बजारमा TSMC को प्रभुत्वको अर्को कारण यो हो कि यसले कटौती-एल एलआर प्रविधिमा लगानी गर्न जारी राख्छ।टीएमसीका प्रतिस्पर्धीहरू जस्तै wf जस्ता ताइवानको एएमसी र अन्य कम्पनीहरूले बिस्तारै खर्च गरेको विशाल मात्रामा पैसा खर्च गरे।कटौती क्षमता प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धाको महत्वाकांक्षा।